I-China Cross-flow Circuit evaliweyo yokupholisa iiTowers / i-evaporative evaliweyo-yesekethe Iicooler yoMvelisi kunye noMthengisi | Yubing
Ukuhamba komnqamlezo okuValiweyo kweSekethe yokupholisa iiTowers / iiVolor evaliweyo zesekethe
Njengohlobo lwedrafti yohlobo lomnqamlezo wokupholisa umphunga opholileyo, ulwelo lwenqaba (amanzi, ioyile okanye ipropylene glycol) isetyenziselwa ukubonelela ukupholisa okuvalelwe kwikhoyili kwaye engatyhilekanga ngqo emoyeni. Ikhoyili isebenza ngokwahlulahlulahlula inkqubo kulwelo ngaphandle komoya, ukuyigcina icocekile kwaye ingcolise simahla kwilog evaliweyo. Ngaphandle kwekhoyili, kukho ukutshiza amanzi ngaphezulu kwekhoyili kwaye kuxubeka nomoya wangaphandle ukukhupha umoya oshushu ukusuka kwinqaba lokupholisa ukuya kwiatmosfera njengenxalenye yamanzi ekhulayo. Amanzi abandayo ngaphandle kwekhoyili iphinde isasazwe iphinde isetyenziswe kwakhona: amanzi apholileyo aphinda abuyele ekuqaleni kwenkqubo yokufumana ubushushu obungaphezulu ngexesha lomphunga. Inceda ukugcina inkqubo yokucoceka kwamanzi iya kuthi inciphise iindleko zokugcina kunye nokusebenza.
Iimpawu zokuhamba okuvaliweyo kweeselfowuni ezivaliweyo:
Uyilo loyilo lomntu oluneminyango yokungena engaphezulu (enokutshixwa) kunye nendawo yangaphakathi eyaneleyo, abasebenzi bokugcina banokungena ngaphakathi kwinqaba ukuze bahlole yonke imihla kunye nolondolozo nokuba izixhobo zisebenza okanye zivaliwe.
Ngenxa yomoya opholileyo owomileyo kunye nokuhamba kwamanzi okutshiza ngendlela efanayo, umphezulu weetyhubhu ucofiwe ngokupheleleyo ngamanzi okutshiza ukunqanda nayiphi na indawo eyomileyo eya kuthi ikhokelele kwisikali sediphozithi. Kwaye iqondo lobushushu lamanzi okutshiza liphantsi kuneqondo lokulinganisa elinciphisa kakhulu ukukala.
Ukuhamba komnqamlezo okuvaliweyo okupholileyo okuvaliweyo kwamkela itekhnoloji yokudibanisa zombini i-coil kunye nokufaka ukugxothwa kobushushu okwenze ukuba indawo yokuhambisa ubushushu iphucule ukusebenza kwenkqubo.
I-ICE Evaporative cross-flow evaliweyo yesekethe yeicooler 'isakhiwo kunye nezinto eziphambili intshayelelo:
Ngenxa yokuhamba komoya kunye nokuhamba kwamanzi ngendlela efanayo, iyakwazi ukuhlola kunye nokugcina ngexesha lokusebenza.
Yenziwe ngentsimbi ephezulu ye-304 yentsimbi ebekwe ecaleni kwaye yadlula amaxesha ama-3 ukuya kuma-2,5Mpa kwimilinganiselo yoxinzelelo yokuqinisekisa ukusebenza.
Kukhethwe ukhetho kunyango lwamanzi olubalwayo.
Yakhiwe kwaye yenziwa nge-PVC ukunciphisa ubushushu bamanzi okutshiza okuya kuthintela isikali kunye nokuzaliswa okunene kukonyusa ukusebenza kwenkqubo ngokunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi ngokusebenza okungcono kokuhambisa ubushushu.
Iicooler ze-ICE zixhotyiswe ngepompo ye-centrifugal pump.
Uyilo lwesithambeka (ukuthambeka lubhekise ekuphumeni kokungcola okungcolileyo) kwaye isihluzo sesinyithi esingenasici siya kuphucula ukugcwala kunye nokukhutshwa kongcoliseko kwangaxeshanye kususa ukungcola kunye nobumdaka kwisitya.
Egqithileyo Uyilo olwenziweyo lokupholisa iTowers ngembonakalo yoxande
Okulandelayo: Ukuhamba-ngokuhamba kweesekethe eziValiweyo zokuPholisa iiTower / Evaporative ezivaliweyo zesekethe
Iiparamitha zobuchwephesha boMnqamlezo-oValiweyo-wesekethe Ukupholisa iNqaba
Ukuhamba okungqameneyo kuvaliwe okupholileyo
Ukuhamba komnqamlezo okuValiweyo kwiSekethe yokupholisa iNqaba